Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi ah? Oo waxaa ii sheeg adeegga?
Waxaan nahay warshad ayaa ku takhasustay soo saarka processing aluminium muddo ka badan 10 sano, sida wax warshadaha aan caadiga ahayn, aluminium jediyay qaybo, qayilo aluminium, saxanka kulaylka, fur aluminium iwm
Waa maxay faa'iidooyinka iyo geedi socodka si aad? Ma jiraa MOQ kasta oo loo baahan yahay?
Waxan u fidinaa adeega OEM falanqeeyo aluminium qiimo warshad in tayada ugu fiican. habka amarka waa in aad sawir ka ah noogu soo diraan, oo aan falanqayn aad sawir iyo quote inaad ku salaysan MOQ aad looga baahan doono. (No MOQ loo baahan yahay, laakiin qiimaha for tiro yar oo noqon lahayd ka badan tirada weyn)
Sidee damaanad ee tayada badeecada?
Waxaan qaban u adkeeyo tayada gacanta ka aad u bilaabeen in ay dhamaadka iyo in ujeedkiisu yahay 100% baadi free. Waxaad u baahan kartaa adeegga macaamiisha-iib aheyn ka dib haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo. amar kasta waa in la soo maray iyada oo waaxda QC hortooda maraakiibta.
Ma waxaad u baarka? waa lacag la'aan ama dheeri ah?
Haa, waxaan soo bandhigi kartaa tijaabada lacag oo lacag la'aan ah, laakiin aadan bixin qiimaha xamuulka, iyo ujeedada baarka kuugu soo diray kuwa hubinta our alaabta tayada iyo nidaamka technology.
Sidee ayaa laga yaabaa in habka haddii aan u baahdo dhigi noocooda ah?
Haddii aad qabto sawiro ama shaybaarka, fadlan si xor ah inay noo soo diraan, oo noo sheeg shuruudaha gaarka ah sida wax, dulqaad, daaweyn dusha iyo inta aad u baahan tahay.
Sidee baad markab badeecada? Sidee dheer waa markii dhalmada aad?
Sida for qaadashada tijaabada, guud ahaan waxa ay ku saabsan 5 ~ 10 maalmood, laakiin waxaa la sida ay tirada iyo waxyaabaha complicated.We iyaga markab laga yaabaa by oogeen, EMS iwm Sida ee si weyn in ay soo saaraan alaabta, waxaan iyaga markab doonaa by FOB , waqtiga dhalmada waxay ku salaysan tahay dalka aad jeclaan lahayd in markab, laakiin maalmaha qiyaas ku saabsan yahay 25 maalmood.
Xaggee ku yaalaan aad warshad? Sidee i waxa ay booqan kartaa?
Shirkadda Our waxa uu ku yaalaa Jiji Industrial zone, Shanghe Village, Wangniudun Town, Dongguan City, oo taasuna waa magaaladii ugu dhow ka Shenzhen, Guangzhou, Hijmans.